VaMnangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti vasaite zvemhirizhonga pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika.
Vachitaura pamhemberero dzekucheredza dzechimakumi matatu nepfumbamwe dzezuva remauto kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga, VaMnangagwa, avo vanova zvakare mukuru wemauto ose munyika, varumbidza mauto nebasa raanoita mukuchengetedza runyararo munyika.
VaMnangagwa vati mauto emunyika ari kuita basa guru kwazvo mukuchengetedza runyararo, mutemo pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Vatora mukana uyu kukuridzira veruzhinji kuti vasapandukire hurumende yavo.
Mashoko aVaMnangagwa aya anouya apo MDC ichiti icharitidzira muHarare nemusi weChishanu svondo rino ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kwakaita hupfumi hwenyika.
MDC inotiwo haisi kufara nekubirirwa kwainoti yakaitwa musarudzo dzegore rapera kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati VaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi izvo zvakatsinhirwa nedare reConstitutional Court.
Mashoko aVaMngangwa aya atsigirwa nemumwewo aenda kumhemberero idzi, VaItai Mopani, avo vati vanotsigira bato reZanu PF.
VaMopani vati dai pasina zvakaitwa nemauto mukuratidzira kwakaitika muna Nyamavhuvhu wegore rapera pamwe nemunaNdira wegore rino, veruzhinji vangadai vakarasikirwa nemidziyo yakawanda zvikuru.
Asi mutauriri weMDC, VaDaniel Molekele, vaudza Studio7 kuti mauto haafanire kuita basa rawo achishandiswa nevari mune zvematongerwo enyika.
Muna Nyamavhuvhu gore rapera pane vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja.
Mauto aratidzawo veruzhinji ndege dzehondo dzemhando yema hawks dzaasati amboratidzwa kubva nyika yawana kuzvitonga.
Pamhemberero idzi, VaMnangagwa vapawo menduru kumasoja akabatsira vanhu vakakanganiswa nemafashamu emvura kuChimanimani eCyclone Idai.
Vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti iwedzere vari muchiuto mari dzemihoro vachiti mauto ari kuomerwawo nehupenyu sezviri kungoitawo ruzhinji kubudikidza nekusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika.
Vashorawo vemabhizimusi vari kutora mukana wekusamira zvakanaka kwehupfumi pari kuitwa chirongwa che austerity kukwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano.
Vatiwo hurumende yavo yakazvipira kurwisana nehuori munyika vakati hurumende yavo haisi kuzozeza kusunga vese vari kuita zvehuori.
Papedza VaMnangagwa kutura mashoko avo veruzhinji vazosara vachivaraidzwa nevaimbi vakasiyana-siyana pamwe nemutambo wenhabvu pakati chikwata chemauto emuno neekuLesotho.